"Reglon Super": uru nke ịkwa ụda na ntụziaka maka iji - Mkpụrụ ubi - 2020
Otu esi eji ọgwụ "Reglon Super": ntụziaka maka ojiji
Usoro nke na-eto eto ụfọdụ anaghị adị mfe mgbe niile, ma nsogbu ụfọdụ na-ebili n'oge owuwe ihe ubi. Ya mere, iji mee ka ebe ahụ dị ọcha, ndị ọkachamara amalitela ịkwadebe ihe ndị dị mkpa - ndị a bụ ngwá ọrụ ndị na-enyere aka ịnagide ọdịbendị ndị "siri ike", ihicha ha na osisi. Na otu n'ime ndị a, a na-akpọ "Reglon Super" ma ga-atụle ya n'ihu.
Ihe omimi nke ndi ozo
Uru nke ọgwụ a
Mmekọrịta na ọgwụ ndị ọzọ
Usoro maka nkwadebe nke ọrụ ọrụ
Otu esi eji: ntuziaka maka ojiji
Nsogbu ngwa ngwa
Ọnọdụ oge na nchekwa
Nkọwa na mejupụtara
"Reglon" na-ezo aka na klas nke ndị na-akpọtụrụ ndị na-akpọtụrụ tupu owuwe ihe ubi. Ọ na-ebibi nke ọma na akpụkpọ anụ nke ọdịbendị, nke a na-esi na ya kpochapụ. Mmetụta kachasị na osisi bụ nke nkwadebe, dikquit, nke bụ ihe nke na-emebi ngwa ngwa mgbe ọ kụrụ osisi ahụ, nke mere na ọ nwere ike iji ya mee ihe na-enweghị ihe ọ bụla na ihe ọkụkụ na-eri. Usoro nke "ihicha" na-enye aka na-achịkwa ịgha mkpụrụ nke ihe ọkụkụ, nke nwere mmetụta dị mma na owuwe ihe ubi: ọ bụrụ na osisi niile nọ n'otu oge nke ntozu okè, ọ dịghị mkpa ka usoro ahụ gbanwee.
Ị ma? Ihe a na-akpọ "amịlị lemon" nwere acidic acid, nke, n'eziokwu, bụkwa ahịhịa. Ha na-egbu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkpuru akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (ma e wezụga Duroia hirsuta) site n'ịgbanye ihe ahụ n'ime akwụkwọ ha.
A na - eji "Reglon Super" mee ihe maka ịgha mkpụrụ nke ụdị nri dị iche iche: sunflower, wheat, flax, beet, potato, rape, pea, yana osisi mmepụta ihe na nri. Ọ dị mma maka ọrụ nke ahịhịa herbicide iji chekwaa ụdị dị iche iche nke ihe ọkụkụ sitere na mkpịsị ugbo ọka na mkpụrụ ọka.
N'agbanyeghị ọnụnọ nke ndị na-achọsi ike na ahịa nke oge a, Reglon Super na-atụle ha nke ọma n'ihi uru ndị a:
N'ime minit 10 mgbe ejiri ya, mmiri mmiri ozuzo agaghị ehichapụ ọgwụ ahụ ma nwee ike ịmalite ọrụ ya n'ụzọ dị irè ọbụna na okpomọkụ nke +28 Celsius.
Na ya, osisi ahụ na-etowanye ngwa ngwa na nke ọzọ, nke pụtara na ị nwere ike ihicha ha na ọnọdụ ihu igwe na oge kachasị mma.
Ọ bụ otu n'ime ọgwụ ndị kachasị ngwa ngwa, nke na - enye gị ohere ịga n'ókèala ahụ mgbe 5-7 ụbọchị gachara nhazi ihe ọkụkụ.
Ịbelata iru mmiri nke osisi ndị a na-emeso ha na-ebelata ụgwọ nke usoro nchịkọta ma belata nfu ha mgbe ha na-ewe ihe ubi.
Mmetụta dị mma na-amị mkpụrụ, na-eme ka mkpụrụ osisi dị mma ma na-echekwa ọdịnaya mmanụ.
Ọ na-enyere aka ịkwụsị mmepe ma gbasaa nke ọrịa ndị a maara nke ọma dika ire ntụ na agba ọcha nke sunflower, mbubreyo bọta nke poteto, wdg.
Tinyere osisi ndị a kụrụ n'ubi, ọgwụ ọjọọ na ahịhịa, nke na-eme ka usoro nhicha zuru ezu.
Echere m na ọtụtụ ndị na-elekọta ubi ga-ekweta na ndepụta ndị dị otú ahụ karịrị iji iji "Reglon Super" dị na saịtị ya, ọ bụghị n'efu na ngwá ọrụ a enwetawo ọtụtụ ewu ewu n'etiti ndị ọrụ ugbo.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-emeso ebe ndị na-acha akwụkwọ ndụ na-eji nkwadebe ọgwụ ọ bụla, ọbụlagodi na a naghị ele ya anya dị oke egwu, ọ dị mkpa iji chebe onwe gị pụọ na mmetụta ya. Jide n'aka na ị na-eji ihe nkpuchido, mkpuchi na mgbanwe uwe, nke a ga-asacha ngwa ngwa n'ọgwụgwụ.
Mgbe ha na-edozi nduku ubi, a na-ekwe ka onye ọrụ a kọwara na Shirlan fungicide kwadoro, ma ejikọta ya na pesticides ndị ọzọ (ma ọ bụ fungicides ma ọ bụ ụmụ ahụhụ) bụ ihe na-adịghị mma, nke akọwapụtara site n'iji ya eme ihe. Na Reglon Super tank mixes, a pụkwara ijikọta ya na ammonium nitrate na / ma ọ bụ urea, n'otu oge ahụ ihichapụ osisi na fertilizing ala maka osisi ndị na-eme n'ọdịnihu.
Ọ dị mkpa! Mmiri mmiri a ga - emegharị oge n'oge nhazi nke osisi, nke ga - enyere aka hụ na a na - ekesa ọgwụ na mmiri. A ghaghị iji ihe ngwọta na-arụ ọrụ zuru oke mgbe nile n'ime awa 24 mgbe ị kwadebechara.
Na-eche na onye na-achọ ịchọrọ anya kwesịrị ịmalite ịkụcha mkpụrụ ahụ ozugbo, jiri mmiri dị ọcha dozie ihe ngwọta ahụ. Iji malite, wụsa mmiri mmiri na ọkara tank ahụ, gbanwee igwekota wee gbakwunye ọnụ ọgụgụ dị "Reglon" (kpebisiri ike ịdabere na ụdị omenala a na-edozi). Mgbe nke ahụ gasị, gbakwunye mmiri chọrọ (mmiri ruo tankị zuru ezu).
Na-ekwu maka Reglon Super, dịka, n'ezie, maka nkwadebe ọ bụla ọ bụla, ọ gaghị ekwe omume ịkpọ usoro edozi nke ihe oriri n'ụzọ zuru ezu maka ọdịbendị nile.
Dịka ọmụmaatụ, maka nhazi flax, o zuru ezu iji 1 liter nke mejupụtara kwa 1 hectare nke ubi (a na-agwọ ya na oge nke browning 85% nke isi na mmalite odo odo oge), mgbe mkpụrụ a kụrụ n'ubi ga mkpa 2 lita kwa 1 ha (a na-arụ ọrụ na ngwụsị nke nhazi tubers na usoro nke ịkpụcha nkụ).
Ọ ga-adọrọ mmasị gị ị mụta banyere ndokwa ndị ọzọ maka osisi, dịka Switch, Tiovit Jet, Ekosil, Nemabak, Aktofit, Ordan, Kinmiks, Kemira, na Kvadris.
N'ihi oyi na mmiri rapeseed, 2-3 lita kwa 1 ha ga-mkpa, nke na-eji maka ripening banyere 80% nke pods. A na-ejikwa Reglon Super mee ihe ndị a kụrụ n'ubi na-agba agba 75-180 nke isi, nke a na-eji 3-4 l nke ngwaahịa kwa hectare. Mgbe ị na-eto eto, ọgwụ dị mkpa maka ọgwụ ahụ bụ lita 2-3 (kwa 1 hectare), a na-emezikwa nkwụsị mgbe ọ na-agba aja aja 50-70% nke agwa.
A na-edozi peas na fodder pees 7-10 ụbọchị tupu owuwe ihe ubi, nke 2 lita nke Reglon na-eji kwa 1 ha. Ụkpụrụ ya maka ojiji nke onye na-akwa ụra na-adị mgbe a na-eji ya maka ihe ndị ọzọ na-eto eto:
Carrots n'oge zuru oke nke mkpụrụ (na igwe nke nke abụọ) na ọnụ ọgụgụ ha dum adịghị elu karịa 50% - 2-3 l / ha.
8-10 ụbọchị tupu owuwe ihe ubi eyịm na tonip - 2-3 l / ha.
Akwukwo ndi ozo na oge nke odo odo nke obere agwa na onu ogugu - 4-5 l / ha.
Lupine dị warara na-acha odo odo (mkpụrụ a kụrụ) mgbe browning 80% nke agwa - 2-3 l / ha.
Alfalfa (nakwa mkpụrụ a kụrụ) na oge russeting 80-90% nke agwa - 2-4 l / ha (na nhazi nke 4-5 l / ha, nke a na-ekwekwa ka eji osisi mee maka nri nri).
Cabbage testicles mgbe ha na-eru na ndu ripeness na mgbe mmiri mmiri adịghị karịa 50% - 2-3 l / ha.
Ngwurugwu na-awụ na-amalite ná mmalite nke nkata na-ezipụ ihe (nkedo na-alụbeghị di na nwunye) - 2 l / ha.
Mgbasa osisi radish n'oge oge ntancha mkpụrụ nke mkpụrụ osisi na mmiri dị n'ime ihe karịrị 55% - 4-5 l / ha.
Mgbe nhazi ọka kwesịrị ichere oge tupu owuwe ihe ubi. Ya mere, maka flax flax ọ bụ 5-6 ụbọchị, klova - 5-6, sunflower - 4-6, kabeeji - 5-10, peas - 7-10, poteto - 8-10, radish - 10, okpokoro biiti na fodder biiti - 8 ụbọchị.
Dabere na ọnọdụ ihu igwe na ọnọdụ nhazi nke ihe ọkụkụ ahụ n'oge nhazi, nakwa ihe ngosi ndị yiri ya mgbe emechara ya, osisi ndị a na-amị n'ime oge 5-10. Ihe na-esi na njedebe na-emetụta ọnya nke ihe na-arụsi ọrụ ike, ya bụ, ọ bụrụ na a hụghị usoro ọgwụgwọ ahụ, ọgwụ ahụ nwere ike ọ ga-arụ ọrụ ngwa ngwa ma ọ bụ ma ọlị.
Ị ma? Na carrots, oke akụkụ ya niile bụ nri: sitere na mgbọrọgwụ na akwukwo, nke a na-apịghị etinye na soups na salads, kama ọ na-akụkwa tii.
A ghaghị ịchekwa "Reglon Super" ọgwụ na ebe echedoro site na ìhè anyanwụ kpọmkwem, na ikuku ikuku dị elu karịa +35 Celsius. Ọ dịkwa mkpa na ngwaahịa ahụ ga-echekwa na mbụ, ngwugwu mechiri emechi maka ihe karịrị afọ 3.
N'ịmụta uru nile nke iji Reglon Super mee ihe, ị ghaghị ịchọta nkwubi okwu dị mma maka iji ya eme ihe na mpaghara gị.
Atụmatụ na-eto eto na-akọ: na-akụ ma na-elekọta
Mmezi na mmepe mmepe nke ndanda
Nri ndị dị ụtọ na dịgasị iche na Chinese kabeeji na sausages: smoked, sie na ndị ọzọ iche